मकवानपुर/ हेटौँडा–४ स्कुलरोडमा हिरालाल साहले संचालन गरिरहेका किराना पसल तथा मिनि डिपाटमेन्टर स्टोरमा प्रशासन सहितको टोलीले केही दिन अघि अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा साहले म्याद नाघेको खाद्यपदार्थ विक्रिको लागि राखेको र कम तौल भएका चामलको बोराहरु भेटिएको थियो । २५ किलो चामलको बोरामा प्रतिबोरा ३ सय देखि साढे ४ सय ग्रामसम्म कम रहेको पाइएको थियो ।
उनले कालो बजारी गर्दै आएको भन्दै सोमबार उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च मकवानपुरले साह बिरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा उजुरी दर्ता गराएको छ । हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा पुगेर साह बिरुद्ध कालो बजारी गरेको अभियोग लगाउँदै मञ्चका अध्यक्ष बासु खतिवडाले उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
हिरालालको पसलमा यसपटक मात्र अनुगमन गरिएको होइन । सर्वसाधरणको स्वास्थ्यमा सिधै असर पुर्याउने म्याद नागेका खाद्यन्न बेच्दै आएका साहको पसलमा धेरै पटक अनुगमन भैसकेको छ । अनुगमन भैसक्दा पनि उनलाई आजसम्म पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । मञ्चले दर्ता गराएको उजुरी पश्चात् साहलाई कारवाही गर्न सक्ला त प्रशासनले ?
नयाँ वर्षकै दिन ठगीनुको पीडा कसले सुन्ने ?
नयाँ वर्षकै दिन ठगीनुको पीडा कसले सुन्ने ?...